Entona amin'ny saka: antony sy vahaolana | Noti saka
Entona amin'ny saka: antony sy vahaolana
Maria Jose Roldan | | aretina, Cheats
ny gazy amin'ny saka Izy ireo matetika dia olana izay tsy omentsika lanja firy mandra-pahatonga azy ireo ho maimbo be. Matetika izy ireo dia ampahany voajanahary amin'ny dingan'ny fandevonan-kanina, fa rehefa misy ny soritr'aretina hafa, dia mety hanomboka hitadidy ny fahasalaman'ny volony.
Andao hojerena inona no antony, soritr'aretina ary vahaolana amin'ny entona amin'ny saka.
1 Ny antony mahatonga ny gazy amin'ny saka
2 Soritr'aretina gazy amin'ny saka
3 Fanafody etona ao an-trano ho an'ny saka
3.1 Aza omena ronono
3.2 Omeo sakafo tsy misy fibre sy serealy izy
4 Fanafody bebe kokoa hitsaboana gazy amin'ny saka
5 Olana ara-pahasalamana ve izany?
6 Rahoviana no handeha ho any amin'ny vet?
Ny antony mahatonga ny gazy amin'ny saka
Ny ankamaroan'ny gazy dia avy amin'ny fidiran'ny rivotra, ka ny iray amin'ireo antony lehibe indrindra dia ny saka mihinana haingana bena noho izy mifaninana amin'ny saka hafa mba hahazoana azy na ho an'ny aza stress (fanazavana fanampiny eto). Antony iray hafa dia satria nanomboka nisakafo avy hatrany ianao rehefa avy nihazakazaka sy nanao fanatanjahan-tena nandritra ny fotoana kelikely. Tsy izy ireo ihany anefa no antony.
Ny sakafo fatratra amin'ny varimbazaha, katsaka na ny derivatives dia mety miteraka gazy be loatra. Amin'io lafiny io dia tsy maintsy holazaina fa mpihinana hena ny saka, ary tsy afaka mandevona tsara ireo sakafo ireo ny rafi-pandevonan-kanina. Ary koa, raha omena ronono na vokatra vita amin'ny ronono izy ireo dia mety hiafara amin'ny entona mandalo ihany koa. Ary, rahoviana, tsy maintsy manalavitra ny fanakaikezana ny fako ianao, satria mety hihinana sakafo ratsy izany ary hahatonga anao hahatsapa ho ratsy. Tsy maintsy kosehinao isan'andro koa izy io, raha tsy izany dia mety hitera-doza ianao volom-bolo, ary vokatr'izany dia mety manana lasantsy ianao.
ny katsentsitra tsinay ary ny aretin-kibo Izy ireo koa dia mety ho antony iray mahatonga ny saka hanana io olana io.
Soritr'aretina gazy amin'ny saka
Ny 99% ny gazy tsinay dia tsy misy fofona, ka tsy mora foana ny mahalala raha manana olana amin'ny digestive ny saka. Aza matahotra anefa, Ity ny lisitry ny soritr'aretina matetika:
Feo ao amin'ny làlam-pandevonan-kanina
Fanafody etona ao an-trano ho an'ny saka
Raha lasa olana ny entona saka anao, ary indrindra raha miahiahy ianao fa misy aretina io dia tokony ento any amin'ny veterinera izy ho dinihinao. Fa ao an-trano dia afaka manao zavatra maromaro koa ianao, toy ireto manaraka ireto:
Aza omena ronono
Ny rononon'omby dia manana lactose, izay siramamy tsy zakan'ny saka satria tsy mamokatra anzima ilaina amin'izany, lactase. Tokony hialana amin'ny fanomezana ronono sy vokatra vita amin'ny ronono hafa avy amin'ny biby, afa-tsy ireo izay tsy manana lactose.
Omeo sakafo tsy misy fibre sy serealy izy
Ny ankamaroan'ny sakafo saka dia be fibre sy serealy, izay na dia loharanom-proteinina aza dia tsy afaka mandevona azy ireo tsara ireo biby ireo. Mba hisorohana ny saka tsy mahazo lasantsy, Soso-kevitra ny hanome azy sakafo izay manankarena amin'ny proteinina niavian'ny biby ary mahantra amin'ny serealy sy ny derivatives.
Fanafody bebe kokoa hitsaboana gazy amin'ny saka
Ho fanampin'ireto voalaza etsy ambony ireto dia holazainay aminao ny momba ny fanafody hafa izay tsara ho fantatrao koa ... amin'ity fomba ity dia ho fantatrao ny fomba hanampiana ny saka tsy hijaly amin'ny gazy (satria mety haharary amin'ny sasany izy ireo tranga).
Etsy andaniny, hevitra tsara ny manoratra izay nohanin'ny saka ato anatin'ny 24 ora miaraka amin'ny tanjona hahafahana manao fanaraha-maso tsara ary hahitana hoe inona avy ireo sakafo mety hiteraka ireo gaza ireo.
Ho fanampin'izay, mba hanampiana ny saka anao hanafoana ireo entona ireo dia tsara raha dinihinao ireto manaraka ireto:
Ovao tsy tapaka ny sakafo ho lasa iray izay tsy misy fibra ary manana sakafo mora levona. Ny mpitsabo anao dia afaka manolotra ny tsara indrindra ho an'ny antsy.
Fahano sakafo kely ny sakao fa matetika kokoa mandritra ny andro.
Raha manana saka mihoatra ny iray ao an-trano ianao, dia tsy maintsy hanome sakafo azy ireo misaraka ianao hitazomana azy ireo tsy hiady amin'ny sakafo.
Sakano ny saka tsy hihinana sakafo simba (ohatra, ilay ao anaty fako).
Tokony ho azonao antoka izany ny saka fanazaran-tenanao matetika.
Raha mieritreritra ianao fa mavesatra loatra ny gazy ao amin'ny sakafonao, dia mila miresaka amin'ny mpitsabo biby ianao hanomezana torohevitra anao momba ny fanafody mety amin'ny saka ary afaka manampy anao amin'ny famoahana gazy.
Misy vahaolana vitsivitsy amin'ny olan'ny gazy ao amin'ny saka, ohatra:
Famenon'ny anzima pancreatic
Aza omena fanafody na vahaolana gazy mihitsy ny saka raha tsy miresaka izany amin'ny mpitsabo anao., na dia heverinao fa fanafody voajanahary aza izy ireo ary tsy hanisy ratsy anao. Ny matihanina dia tsy maintsy manombana anton-javatra manan-danja maro toy ny karazany, taona na lanjan'ny biby fiompinao.
Olana ara-pahasalamana ve izany?
Ho an'ny ankamaroan'ny tompon'ny saka gazy dia manahy be izy ireo satria mihevitra fa ny gazy manahirana dia mety ho olana ara-pahasalamana lehibe. Raha ny marina, ny entona mandeha ho azy tsy voatery ho zavatra ratsy, fa rehefa lasa be loatra ianao dia mety mila fitsaboana satria lasa olana matotra kokoa noho ny niheverana azy tany am-boalohany. Ny sasany amin'ireo olana mety mahazo anao dia ny.
Parasites (fampahalalana misimisy kokoa)
Sakana ny tsinay
Ny fahalemen'ny vavony
Na ahoana na ahoana, raha mieritreritra ianao fa ny saka anao dia mety mijaly amin'ny aretina rehetra, na ilay voalaza etsy ambony na ny hafa, dia zava-dehibe tokoa ny mankanesanao any amin'ny mpitsabo anao hanao ny fitsapana mifandraika amin'izany. Amin'izany dia ho fantatrao tsara ny mahazo ny saka anao ary amin'izay no hahitanao ny fitsaboana sahaza azy.
Rahoviana no handeha ho any amin'ny vet?
Araka ny efa nolazainay anao etsy ambony, zava-dehibe ny manatona dokotera isaky ny mieritreritra ianao fa manana karazana aretina ny saka, fa na izany na tsy izany dia zava-dehibe ny fahitana olona matihanina raha sendra etona sy sasany amin'ireo fambara ireo, satria mety hanondro olana ara-pahasalamana lehibe izany:
Manana fanaintainana ao amin'ny kibony rehefa mikasika azy ianao
Manana kibo mivonto
Tsy nanao fivalanana
Misy rà ao amin'ny fipetranao
Amin'ny farany, ary ho fepetra fisorohana, tena zava-dehibe ny fiheveranao ny toerana ahafahan'ny biby fiompinao mahazo sakafo. Ohatra, ao an-trano, araho mandrakotra tsara ny fitoeram-pako ary aza avela hivezivezy ny biby fiompinao na handeha amin'ny tokotanin'ny mpifanolobodirindrina aminao, ary avelao izy hivezivezy manodidina ny toerana itahirizana fako.
Ary koa, raha mihinana taimbo ny biby fiompinao (ny azy sy ny an'ny biby hafa) satria tsy ampy sakafo izy, dia tsy maintsy manasitrana ianao ary miresaka amin'ny mpitsabo biby momba ny zava-mitranga.
Ny gazy amin'ny saka dia mety ho olana tsy mampahazo aina anao, saingy amin'ireo tetika ireo dia azo antoka fa ho afaka hamaha azy ireo ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » aretina » Entona amin'ny saka: antony sy vahaolana
Lissette Ivonne Castillo Zambrano dia hoy izy:
Ny vavoniko ny saka dia feno gazy nefa tsy mihinana izy ary mahia sy midina, azoko omena azy noho ny fivontosana satria toa amponga
Mamaly an'i Lissette ivonne castillo zambrano
Miala tsiny aho fa ratsy ny saka, fa tsy afaka manampy anao aho satria tsy veterinera.
Manoro hevitra anao aho hitondra izany any amin'ny matihanina.
Efa 10 andro ny zanako vavy, nandao azy ny reniny ary mitaiza azy aho, saingy mamontsina ny kibony daholo ny ronono ary manana colic sy gazy betsaka izy, inona no azoko atao?
Manoro hevitra anao aho hitondra azy any amin'ny mpitsabo (tsy izaho).
Mety manana kankana koa ianao. Amin'ity taona ity dia tena marefo izy ireo.